Sida loo Helo iPhone Xiriirada Lugood
Sida lagu Helo iPhone Xiriirada ka Lugood aan iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS
> Resource > iPhone > Sida lagu Helo iPhone Xiriirada ka Lugood aan iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS
Wax wanaagsan oo la isticmaalayo iPhone waa in aad ka heli kartaa xiriirada in Lugood haddii aad iyaga laga badiyay, xitaa laga badiyay aad iPhone ama aad u hesho waxa ay u kala jabtay. Waxaynu wada ognahay in Lugood gurmad xiriirada iPhone aad kartaan marka aad u hagaagsan aad iPhone la, laakiin gurmad ah la aqrin. Sida aynu ka heli kartaa iPhone xiriirada ka Lugood, xitaa iyada oo aan iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 ama iPhone 3GS? Waa wax iska fudud quruxsan. Just on akhriso oo ku hage hoos ku qoran si aad u ogaato xiriirada iPhone aad Lugood.
Si aad u bilaabaan oo leh, aad u hesho Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) . Labada iyaga ogolaado in aad si aad u ogaato xiriirada iPhone in Lugood iyo siday uga bixi waxaa ka mid ah iyada oo aan xanuun ah. Geedi socodka oo dhan waxaa si toos ah u sameeyey. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa si loo soo dajiyo oo ay maamulaan barnaamijka aad PC ama Mac, ka dibna hubi iyo badbaadin xiriirada iPhone si aad u computer .
Dhab ahaantii, waxaad kala soo bixi kartaa version mid ka mid ah barnaamijka Windows. Dhammaantood way wada ha aad ka heli xiriirada on iPhone wax ka Lugood. Kaliya dooro mid ka mid ah oo hadda download it.
Sida loo Helo xiriirada iPhone in Lugood leh 2 tallaabooyinka
Next, aynu isku dayi version Windows ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka in tallaabooyinka. Dadka isticmaala Mac, waxa kale oo aad samayn kartaa talaabooyin la mid ah si ay u helaan xiriirada iPhone aad Lugood aad Mac.
Tallaabada 1. Waraaqda aad Lugood gurmad file
Ka dib markii socda barnaamijka on your computer (waa in ay ka mid halkaas oo aad synced aad iPhone la Lugood), dooro "kabsado Lugood ee kaabta File" dusheeda. Waxaad arki doonaa suuqa kala ah sida soo socota.
Halkan dhan Lugood gurmad files on your computer la soo daabici doonaa. Mid ka mid ah si aad u iPhone Dooro oo guji "Start Scan" Macdan xiriirada ku dhex jira. Haddii ay jiraan wax ka badan hal gurmad file aad iPhone, ee ka dooro mid ah taariikhda ugu dambeeyay.
Fiiro gaar ah: Ha xiriiriyaan iPhone in computer marka aan sidaa yeelno. Lugood cusbooneysiin doonaa gurmad ugu dambeeyay haddii aad synced aad iPhone la ka dib markii xidhiidhka.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha iyo xiriirada aad u hesho iPhone ka Lugood
Skaanka aad qaadan doontaa dhowr ilbidhiqsi. Ka dib markii in, dhammaan xogta ku gurmad Lugood la soo saaro doonaa oo soo bandhigay qaybaha cad sida kitaabkii duudduubnaa camera, il sawir, xiriirada, fariimaha, qoraalo, iyo sidaas. Si aad u hesho xiriirada iPhone aad, dooran category: Xiriirada. Waxaad ku eegaan kartaa faahfaahin buuxda ee kasta xiriir, oo ay ku jiraan magac, shirkad, lambarka telefoonka, cinwaanka Email, iwm hubi waxa aad rabto oo guji "Ladnaansho" u badbaadin on your computer. Waa shaqo oo hal-click.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad soo dhoofsadaan xiriir kuwaas oo si aad iPhone dib, ama si iPhone cusub, waxaad isticmaali kartaa Wondershare TunesGo ama Wondershare TunesGo (Mac) , kaas oo kuu ogolaanaya in aad si fudud u maamuli lahayd xiriir iPhone, fariimaha, sawiro, videos, iwm
Download version tijaabo ah Wondershare Dr.Fone ee macruufka hoose oo lacag la'aan ah hadda:
Sida loo Waraaqda iPhone Xiriirada in vCard / VCF
Xalka ugu fudud si ay u gudbiyaan Music ka Computer si ay iPhone
Talo si aad iPhone si dhakhso ah (ay ka mid yihiin iPhone 4 / 4s / 5 / 5s / 6/6 Plus)
iPhone Bedelaadda Qaybo: Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Common iPhone Music Dhibaatooyinka iyo Solutions
iPhone Bedelaadda Screen Dhibaatooyinka